Mgbakọ ngwaahịa - Chapman Technology Co., Ltd.
Na usoro nke mmepe ngwaahịa, ngalaba mgbakọ bụ otu n'ime ngalaba kachasị mkpa anyị. Si ngwaahịa ule, ngwaahịa nzukọ, okokụre ngwaahịa Mbupu, ndị a na-arụ ọrụ na gburugburu, nzukọ na-egosi dị ezigbo mkpa.
Anyị na-ekewa abụọ nzukọ noo maka electronic na ọkụ ngwaahịa na ọgwụ na ahụ ike na ngwaahịa. Na ngalaba igwe eletriki na eletriki, anyị nwere sistemụ nchekwa maka iyuzucha na nchekwa ọkụ. Na ngalaba mgbakọ ngwaahịa ọgwụ, Anyị nwere atụmatụ ịtọlite ​​sistemụ ikuku na 2021 iji hụ na gburugburu ebe obibi nzukọ nzukọ na-ezute ụkpụrụ ISO: 13485.
Maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, nchịkọta aka na-ewe oge ma dị oke ọnụ. Anyị na-enye ahaziri ngwọta site na mfe collating ka mgbagwoju ewu na nzukọ. Anyị ga-ewepụta ngwa ngwa, ntụgharị ọsọ ọsọ, usoro ịhazi oge na nsonaazụ ọma.
Onye kere Chapmanraara onwe ya nye maka imepụta ọtụtụ ihe ga-eme ka azụmahịa gị baawanye. Na omenala nkwakọ ngwaahịa, ngwaahịa nzukọ, na ngwaahịa kitting, ọ dịghị mgbe ọ dị mfe iji mee ka azụmahịa gị nrọ ndụ. Ndị otu anyị nwere ọmịiko na-agba mbọ imepụta azịza nke ngwaahịa nke na-anọchite anya ebumnuche azụmahịa, na-eme ka arụpụta ihe dị mfe, na-eme ka ọrụ dị mfe. Na ụlọ ọrụ dị na Dongguan, anyị nwere ike iweta ọpụrụiche anyị na-emepụta maka ndị na-ege ntị ka ukwuu, na-enye nkwado ọkachamara nke nwere ike ịgbanwe ihu ahịa gị.
Onye na-eme Chapmanmgbakọ ngwaahịa na nkwakọ ngwaahịa na-ebuli atụmanya nke ụlọ ọrụ mmezu nke ndị ọzọ, na-agbasawanye ụwa azụmahịa dị ka anyị si mara ya. Iji njiri aka dị mma nke aka aka, teknụzụ na-apụta, yana gburugburu gburugburu, ngwaahịa gị ga-agbakọta ma jiri nkenke na izi ezi. Site na ndị ọrụ okike imepụta ihe, nhọrọ nnyefe sara mbara, yana nlebara anya nke ọma, a ga-ebute ngwa ahịa gị ma tinye ya na ọkaibe na ịdị ngwa na-enweghị atụ.